उत्तम मिर्च रेसिपी - सहज रेसिपी - व्यंजनहरु
च्याउ क्रीम मशरूम सूप विधि
रोस्टरमा बेक्ड आलु कसरी पकाउने
टर्की र भात कासरोल क्रीम मशरूम सूपको
सर्वश्रेष्ठ मिर्च रेसिपी
सर्वश्रेष्ठ मिर्च रेसिपी यो एक हो कि गोमांस र बीन्सले भरिएको छ र पूर्ण स्वादको भरिएको छ ... यो मात्र जस्तो! छेउ मेरो पतिको मनपर्दो भोजन हो! (र मलाई यो मनपर्दछ किनकि यो बनाउन सजिलो छ)!
यो सजिलो चिली नुस्खा स्टोभटपमा पकाउँदछ र सँगसँगै उत्तम रूपमा प्रस्तुत गरिन्छ होममेड कर्नब्रेड , buttered टोस्ट वा छाछ बिस्कुट । उत्तम खानाको लागि तपाइँको मनपर्ने toppings जस्तै चीज र प्याज मा जोड्नुहोस्।
कसरी चिली बनाउने
जब म कहिलेकाँही बनाउँछु crockpot मिर्च , यो सजिलो संस्करण हप्ताको भोजनको लागि उत्कृष्ट छ!
प्रेशर कुकर कुखुराको आलु र गाजर
यस रेसिपीमा मौसमी चिलो पाउडर र जीरा हुन्। स्टोर किन्नुहोस् वा घरमा मिर्ची पाउडर यस नुस्खामा राम्रोसँग काम गर्नुहोस्।
खोर्सानी पाउडरमा के हुन्छ? मीठो पेपरिका, लसुन पाउडर, लाल मिर्च, प्याज पाउडर, ओरेगानो र जीरा।
मिर्च पाउडरलाई कच्चा जमिनको मासुमा मिसाउनुहोस् र पकाउनु अघि प्रत्येक झुण्डमा पूर्णतामा अनुभवी हुन्छ भनेर पक्का गर्नुहोस्।
म क्यान्ड रेड किडनी सेम प्रयोग गर्दछु तर पिन्टो सिम वा कालो सिमीले पनि काम गर्दछ।
अधिक नुन र स्टार्चहरू हटाउनका लागि सिमीहरू (चिली गेडाहरूको प्रयोग नगरेसम्म) कुल्ला।
खोर्सानी सिमी महान स्वाद जोड्नुहोस्! खोर्सानी भनेको के हो? सामान्यतया या त पिन्टो वा मिर्गौला सिमीसँग मिर्च शैलीको चटनीमा थप स्वादहरू।
कसरी चिली पकाउने
खैरो गाईको मासु, प्याज, लसुन र चिली पाउडर को केहि।
नाली कुनै बोसो
सिमर बाँकी सामग्री जोड्नुहोस् र उजागर उजागर।
मोटो चिली गर्न
स्टोभमा खोर्सानी बनाउँदा, मैले यसलाई नदेखेको उमाले जस्तो बनाउँदछ जसले यसले कुखुराको पीठो वा पीठो बिना नै मिर्चलाई प्राकृतिक रूपमा गाढा बनाउन दिन्छ। जबकि सिमर द्वारा मिर्च मोटो पार्नु उत्तम विकल्प हो, तपाईंसँग जहिले पनि यसलाई कम गर्न समय नहुन सक्छ। यदि तपाईंसँग यो गाढा बनाउनको लागि सिमेर गर्ने समय छैन भने तपाईं अलिकती कन्र्नमेलमा छिचोल्न सक्नुहुन्छ वा कन्र्नस्टार्च वा पिठोको घोल बनाएर यसलाई थप्न सक्नुहुन्छ।
यदि तपाईं केहि थप मिनेटहरू बचाउन सक्नुहुनेछ, केवल यसलाई उजागर गरौं।
स्पाइस लेभल यो छेउ मात्र हाम्रो रुचि को लागी सही छ तर तपाईं मसलाको स्तर बढाउन वा कम गर्न सक्नुहुन्छ तपाईंको मनपर्नेमा। थप तातोका लागि, बीउहरू तपाईंको जलपायोसमा छोड्नुहोस् वा तातो चटनीको केही ड्यासहरू वा चिली फ्लेक्सको छिचोल्नुहोस्।
ग्राउंड बीफ कुनै पनि जमिनको मासुले यस नुस्खामा कुखुराबाट टर्की सम्म काम गर्दछ। यदि तपाइँको मासुमा धेरै फ्याट छ भने, यसलाई उमालेको अघि निश्चित गर्नुहोस्।
खैरो चिनी संग प्याज caramelize कसरी
बियर मलाई स्वादको गहिराइ मनपर्छ जुन थोरै बियरले थपेको छ। बेयरलाई स्किप गर्न र स्वतन्त्र महसुस गर्नुहोस् अतिरिक्त ब्रोथ प्रयोग गर्नुहोस्।
मसलाहरू स्वाप गर्नुहोस् तपाईंको मनलाइ कुनै पनि हिसाबले स्पाईस गर्नुहोस्। टेक्स्ट-मेक्स चिली बनाउनको लागि, टाको मसालाको प्याकेटमा टास गर्नुहोस्।
के तपाईं खोर्सानी स्थिर गर्न सक्नुहुन्छ?
१००% हो !!! खोर्सानी स्थिर र रीहिट सुन्दरता। हामी यसलाई द्रुत र सजिलो हप्ताको भोजनको लागि एकल आकारको भागको खाजा वा फ्रिजर झोलामा फ्रिज गर्दछौं।
सम्पूर्ण कुखुरा उमाल्न कति समय लाग्छ?
रातो फ्रिजमा डिफ्रुस्ट गर्नुहोस् र सॉस प्यान (वा माइक्रोवेभ) मा ताप्न दिनुहोस्।
अधिक चिली व्यंजनहरु तपाइँ प्रेम गर्नुहुन्छ
तत्काल भाँडो चिली
इजि क्रोक पॉट चिली रेसिपी
हरियो खोर्सानी पकाने की विधि
१ Be बीन स्लो कुकर चिली
सुस्त कुकर चिकन चिली
स्लो कुकर बटनर स्क्वाश चिली
9.9बाट2 45२भोट समीक्षारेसिपी
तयारी समयबीस मिनेट कुक समयचार मिनेट कुल समय१ घण्टा । मिनेट सर्भिंगहरू। सर्विंग्स लेखकहोली निल्सन यो उत्तम मिर्च रेसिपी हो! गोमांस र सिमीले भरिएको ग्राउन्ड गोमांस चिलीको एक ठूलो भाँडो उत्तम खेल दिन खाना हो! प्रिन्ट गर्नुहोस् पिन
▢दुई पाउन्ड दुबला जमिनको मासु
▢१ प्याज पासा
▢१ jalapeno रोपेको र राम्ररी पाकेको
▢। लौंग लसुन कीमा
▢२ ½ चम्मच खुर्सानी को धुलो विभाजित (वा स्वाद गर्न)
▢१ चम्मच जीरा
▢१ हरियो घाउ मिर्च बीज र पाकेको
▢१½ ½ औन्स टमाटर चुच्चो डिब्बा
▢19 औन्स राज्मा क्यान्ड, निकासी र कुल्ला
▢१½ ½ औन्स पाकेको टमाटर रस संग
▢१ ½ कप गाईको मासु
▢१ कप बियर
▢१ चम्चा गोलभेडा अचार
▢१ चम्चा ब्राउन सुगर वैकल्पिक
▢नुन र मरिच स्वाद गर्न
जमिन गोमांस र १ ½ चम्मच मिर्च पाउडर जोड्नुहोस्।
ठुलो भाँडामा, खैरो ग्राउन्ड गोमांस, प्याज, jalapeno, र लसुन। कुनै बोसो निकाल्नुहोस्।
बाँकी सामग्रीहरूमा थप्नुहोस् र फोकामा ल्याउनुहोस्। Heat 45-60० मिनेट वा मिर्चले आवाश्यक मोटाई नपुगुञ्जेल तताउन र उष्णता कम गर्नुहोस्।
चेडर चीज, हरियो प्याज, कोथिलो वा अन्य मनपर्ने टपिंग्सको साथ शीर्ष।
सेवारि size आकार: १ १/२ कप बियर अतिरिक्त ब्रोथको साथ प्रतिस्थापन गर्न सकिन्छ। कुनै पनि जमिनको मासु यो नुस्खामा काम गर्दछ। वैकल्पिक toppings: खट्टा क्रीम, रातो वा हरियो प्याज, चीज, jalapenos, cilantro, avocado र नीबू wedges, tortilla चिप्स
क्यालोरिज:395,कार्बोहाइड्रेट:२g,प्रोटिन:२g,मोटो:१g,पागलिएको बोसो:6g,कोलेस्ट्रॉल:77मिलीग्राम,सोडियम:२33मिलीग्राम,पोटासियम:१०6666मिलीग्राम,फाइबर:।g,चिनी:6g,भिटामिन ए:7070०IU,भिटामिन सी:२.2.२मिलीग्राम,क्यालसियम:86मिलीग्राम,फलाम:.2.२मिलीग्राम
कीवर्डखोर्सानी कोर्समुख्य मार्ग पकाइयोअमेरिकी, टेक्स मेक्स© SpendWithPennies.com। सामग्री र फोटोग्राफहरू प्रतिलिपि अधिकार सुरक्षित छन्। यस नुस्खाको साझेदारीलाई दुवै प्रोत्साहन र सराहना गरिन्छ। कुनै पनि सामाजिक मिडियामा पूर्ण रेसिपीहरू प्रतिलिपि गर्न र / वा टाँस्न कडा निषेधित छ। कृपया यहाँ मेरो फोटो प्रयोग नीति हेर्नुहोस् ।
मिर्च को लागी Toppings
मेरो # 1 पाठ्यक्रम को मनपर्ने छ कर्नब्रेड वा केवल सादा ओएल ’टोस्ट माखनको साथ। मेरो प्यालाको तल्लोमा जे पनि बाँकी रहेको छ भर गर्न को लागी धेरै रोटी! Min० मिनेट डिनर रोलहरू खोर्सानी पनि राम्रो छ! यदि तपाइँ खानालाई तान्न आवश्यक छ भने, यसलाई सेतो चामलमा सर्व्ह गर्नुहोस्।
म जहिले पनि टपिंग्सको स out्ग्रह बाहिर राख्छु ... र जब सबैसँग फरक विचार हुन्छ कि चिली संग के हुन्छ मसँग केहि स्टेपलहरू छन्:
रातो वा हरियो प्याज
चेडर चीज वा मोन्टेरे ज्याक
पिसेन्ट्रो, एवोकैडो र लाइम वेजहरू
croutons वा tortilla चिप्स
चिली स्वस्थ छ
हो, यो टमाटर र बीमले भरिएको पातलो गाईको मासु हो (र शाकाहारीहरू यदि तपाइँ चाहनुहुन्छ भने)। टोन फाइबर, प्रोटीन र स्वाद सबै एक कचौरामा! निश्चित हुनुहोस कि तपाईं दुब्ला गाईको मासु प्रयोग गरिरहनु भएको छ र कुनै चिल्लो पदार्थ निकास (वा ग्राउन्ड चिकन / टर्की प्रयोग गर्नुहोस् यदि तपाईं चाहानुहुन्छ भने)।
यस नुस्खामा नुन र चिनी घटाउन कम सोडियम वा कम चिनी उत्पादनहरू छनौट गर्नुहोस्।